BNI Madagascar : afaka manokatra petra-bola amina tambajotra | NewsMada
BNI Madagascar : afaka manokatra petra-bola amina tambajotra
Tolotra vaovao ao amin’
ny BNI Madagascar ny afahana manokatra petra-bola amina tambajotra (internet), na aiza na aiza. Ao amin’ny «alefa.bni.mg» ny ahazoana manao izany, izay misokatra ho an’ny rehetra, misy faritra ho an’ny mpanjifa, ny mombamomba ny mpanjifa angatahin’ny BNI, ary fankatoavana ny fifanarahana ka ny code no solon’ny sonian’ny mpanokatra petra-bola. Atao izao tolotra izao hampitombo sy hahamora indrindra ny fikirakiram-bola. Ohatra, fifanakalozana BNI-MVola, fandrotsaham-bola.
Mandritra ny enim-bolana amin’izao fanombohana izao, maimaim-poana ny Pack digital, ny fikambanan’ny tolotra rehetra : petra-bola, karatra Visa internationale Harmonia, BNI-Net sy fiantohana Mia­rina. Afaka ny enim-bolana vao misy sarany. Mifanaraka amin’ny tontolon’ny fiaraha-monina ankehitriny izao fom­ba vaovao fanokafana petra-bola izao. Mamaly ny tina­din’ny tsena: tsy mandany fotoana mifanaraka amin’ny fepetra amin’ny ady atao
amin’ny Covid-19, tsy fankanesana amin’ny toerana me­ty maro olona.
Notsiahivin’ny BNI koa ireo tontolo eto Madagasikara momba ny fampiasana internet (Mivoatra haingana aty Afrika i Madagasikara, Ta­ratra 15 okt 2020, p.10). 3,84 tapitrisa ankehitriny na 14 % ny olona mifandray amin’ny internet, 54 % amin’ny finday afahana manokatra ny petra-bola. Azo antoka ny lafiny fiarovana avy amin’ny traikefan’ity banky ity. Olona iray no nijoro vavolombelona nanokatra ny petra-bolany amin’izany tambajotra izany, iray hafa nampiseho ny fomba fanokafana izany. Mampiaina ao anatin’ny fivoaran’ny teknolojian’ny fifandraisana eto ny BNI Madagascar.